भर्खरै यस्तो घोषणा, काठमाडौँमा भेटियो यतिधेरै संक्रमित, यस्तो बबण्डर, सरकारले लियो यस्तो निर्णय | Public 24Khabar
Home Health भर्खरै यस्तो घोषणा, काठमाडौँमा भेटियो यतिधेरै संक्रमित, यस्तो बबण्डर, सरकारले लियो यस्तो...
भर्खरै यस्तो घोषणा, काठमाडौँमा भेटियो यतिधेरै संक्रमित, यस्तो बबण्डर, सरकारले लियो यस्तो निर्णय
ओए कस्तो दुब्लाएकी ?, खाना नै खादैनौं कि के हो ? डाइटिङमा हो कि के हो ?’
हेर्दा मात्र कहाँ होर, दुब्ला व्यक्तिलाई सपिङ गर्न जाँदा पनि सामान किन्नै समस्या हुन्छ । मनपरेका कपडाहरु सबै ठूलो भइदिन्छन् । यस्तो समस्याबाट तपाईहरु पनि पीडित हुनुभएको छ होला । खासमा युवा युवतीहरु किन दुब्लो हुन्छन् ? आज हामी तपाईलाई यस विषयमा जानकरी दिदैछौं । दुब्लोपनको विभिन्न कारणहरु छन् । गर्भअवस्थामा आमालाई पौष्टिक तत्व नपुगेमा दुब्लो तौल भएको शिशू जन्मन्छन् ।
सामान्यतया साढे दुई केजी भन्दा कम तौल भएको शिशू जन्मिका उसलाई दुब्लो शिशू भन्न सकिन्छ । यस्तै जन्मिएपछि आमाको दुध कम भएमा पनि बालबालिकाको तौल घट्छ । आमाको दुध पर्याप्त नहुँदा बालबालिकाको रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ र दुब्लाउछन्स्वा स्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा पछिल्लो समय जंग फुट (चाउचाउ, विस्कुट लगायतका बाहिरी खाना) का कारण बालबालिका दुब्लाउँदै गएका छन् । बालबालिकामा पोषणको कमी भएका उनीहरु दुब्लो हुन्छन् ।
सामान्यतया वयस्क व्यक्तिलाई दैनिक १८ सय देखि २ हजारसम्म क्यालोरी चाहिन्छ । दैनीक खाने खानमा उक्त परिमाणको क्यालोरी प्राप्त गर्न भएन भने मानिस मोटाउन सक्दैन । मोटो हुँदा मात्रै होइन दुब्लो व्यक्तिमा पनि समस्याहरु आउछ । उचाई अनुसारको तौल कम हुँदै जानुमा व्यक्तिमा क्यान्सरदेखि टिबी र एचआईभी सम्मका रोगहरु लागेको हुनसक्ने पोषणविदहरु बताउँछन् ।
Previous articleबधाई छ : पोखराकी ईन्स्पेक्टर चन्द्रा बनिन नेपालको दोश्रो महिला गुल्मपति
Next articleExclusive: Bijay Shahi ले देखाए पहिलो पटक प्रहरीकै अगाडी Live डेमो ! फेरी ल$फडा, रुदै बोले विजय